IBSA EJJANNO MISEENSOOTA KONYAA ABO BIYYA MASRII. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIBSA EJJANNO MISEENSOOTA KONYAA ABO BIYYA MASRII.
Bitooteessa 15/2021 ]
Kora sabaa waajjira ABO guddicha,Gullalleetti ABO Hilton’n gaggeeffame naamusa ABO kan cabse fi alseerawaa waan ta’eef konyaan ABO Cairo Egypt gadi jabeessinee balaaleffanna.
ABOn dhaaba gidiraa fi siqiqii gabrummaa jaarraa tokko ummata Oromoo irra ga’een kan dhalatedha. ABO akka agartuu qaamaa keenyaatti kunuunsina,akka dhahaannaa onnee keenyaatti dhaggeeffanna. Kanaaf gantoonni dhaaba keessaa sababoota garaagaraan dallananii baa’an fi ergama diinummaa qabatanii keessaa of baasan,kallattiinis ta’u alkallattiin,diinoota Oromoo faana dhaabatanii ABO diiguuf hojjatan ni mormina. ABO’n Hilton dhaaba isaanii dhiisanii erga baa’aan booda, shira isaan ABO irratti yeroo garaagaraa raawwachaa turan kan ummata Oromoo biratti dhokatu miti.
~ABO’n akka waajjirri isaa Gullallee harkaa fuudhamee Poolisii federaalaan eegamu taasisaniiru.
~ABOn qaama lamaa fi sanaa’ol akka ta’ettis fakkeessanii,ABOn WBO faana hidhata qaba jedhanii media biyyattii garaagaraa fayyadamuun dhaaba fi hoggnaa irratti olola sobaa ofaa turan,itti jirus!
~Miseensoota fi Hoggantoota ABO guulantaa garaagaraa irratti hojjataa turan, qaama tika Mootummaaf basaasuun hiisisaa turaniiru,ammas hojii fokkisaa kanatti jiru.
~Qeerroo Bilisummaa Oromoo jedhamu hin beeknu jechuun haalanii, ifatti dubbachuu irra darbanii tika Mootummaa barri angoo isaa irra darbeef maqaa Qeerroo dabarsanii laachuun hiisisaa fi ukkaamsiisaa turaniiru.
~Filannoo ABOn dhiibamee keessaa ba’e,Filannoo sobaa kan garee Abbaa hirreef beekamtii laatu,kan Ummata Oromoo hin fayyadne irratti hirmaachuuf karaa dabaan,dantaa PP’n barbaadu guutuuf hojjataa jiru.
Kana hunda nuti miseensoonni Cairo Egypt hordofaa waan turreef, seer-dhablummaa qofaa miti gantummaa akkasii gadi jabeessinee balaaleffanna!
~ABOn koree naamusaa fi to’annaatti dhiheessee akka miseensummaa isaanii rarraasu fi hamma tarkaanfii ABO keessaa ari’utti fidhachuu qaba.
~ABOn Boordii Filannoo irratti himannaa banuun akka qaamoota seera ABO cabsanii,beekamtii HD.Jaal Daawud Ibsaan alatti waajjira Gullallee keessatti walga’ii taasisan,kan isaan gaafachiisu ta’uu Boordiin Filannoo Ethiopia kana irratti murtii akka kennu ABOn gaafachuu qaba jennee amanna.
~Irbuun Shinniggaa irraanfatamee,Gootoonni Oromoo,Oromoof imaanaa kaa’anii darban dagatamee,irbuu lafee gootota kitilaan seenan cabsanii,diinoota innikkaa Oromoo faana dhaabatanii ABO diiguuf warra saalfii malee tarkaanfataa jiran,ABOn ifatti balaaleffatee,ibsa media akka laatu,ummata Oromoo baldhaa akka ABO dhaaba isaa tikfatu,itti himuu qabas jennee amanna.
Nuti gama keenyaan hojii dhaabni keenya itti jiru fudhannee hojjechuu irratti argamna. MCBO ABOn qopheesse,KFOn deggere akka hojii irra ooluf,yaada eebbifamaa kana Lammiilee Oromiyaa fi ummata Oromoo bira akka deggersa guutuu argatuuf gama keenyaan hojjachaa jirra.
Hamma MCBO hojiirra oolee,Oromiyaan hiree mataa ishee,ofiin murteeffattuutti xurree gootoonni keenya nuf saaqan qabannee qabsoo keenya kan itti fufnu ta’a.
ABO’n lamas,namas miti.Kaayyoo saba baldhaa,agartuu ummata Oromooti.hin diigamu,hin sharafamu,akeekni isaa hirree ummata Oromootiin galma ni ga’a.
Miseensoota Konyaa ABO Cairo Egypt irraa.